बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतिले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे (भिडियोसहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतिले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे (भिडियोसहित)
बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतिले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे (भिडियोसहित)
admin October 18, 2020 October 18, 2020 भिडियो, समाज	0
जीवन त्या’गको एक अनौठो घटना बाहिर आएको छ । भारत, गुजरातको अहमदाबादमा एक जना पतिले आफ्नी पत्नीसँग हैरान भएर यस सं’सारबाट विदा लिएका हुन् । यस घटनापछि सासुले आफ्नी बुहारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन् । मनिनगर, अहमदाबादकी ३२ वर्षीया गीता परमारको २२ महिना अघि सुरेन्द्र सिंहसँग विवाह भएको थियो । उनकी सासु मुल्ली परमारले आरोप लगाईन् बुहारीले छोरासँग नसुतकै कारण यस्तो भएकाे हाे ।
उनले विवाह गरेको २२ महिनाको अवधिमा गीताले सुरेन्द्र सिंहसँग शा’रीरि’क सु’खभो’ग राख्न मानिन् । सुरेन्द्र सिंह पत्नीको यस व्यवहारले धेरै तनावग्रस्त थिए । त्यसैले उनले जीवन त्या’ग गर्न पुगे । उनकी सासुले एफआईआरमा बताइन् कि उनी घर गए पनि उनले दुबैलाई छुट्टै सु’तिरहेको देखेकी थिइन् । सासु मुल्ली परमारले छोरालाई यसबारे सोध्दा उनका छोराले उनलाई भनेका थिए कि बिवाह गरेको २२ महिना पछि पनि गीतासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
छोराले आमासँग गीताले आफुसँग न’सुत्ने श’पथ खाएको बताएका थिए । सुरेन्द्र सिंह एक रेल कर्मचारी थिए भनिएको छ । अक्टोबर २०१८ मा उनले गीतासँग बिहे गरेका थिए । यस अघि उनको २०१६ मा पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । यता, गीताले पनि सुरेन्द्रसँग बिहे गर्नुभन्दा अघि दुई जनासँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी थिइन् ।
दुई दिनअघि मात्रै असई गोविन्दले सीमा क्षेत्रबाट अवैध सुर्ती बरामद गरेका थिए
सम्पर्क गर्दागर्दै २६ बर्षे युवाको लि’ङ्ग भाँ’चिएपछि मध्यरातमै यस्तो अवस्थामा पुगे अस्पताल (भिडियो हेर्नुस्)
भारतले कश्मिरी आतङ्कबादीका मस्ट वान्टेड ‘मूसा’ मारेपछि… भिडियो सहित हेर्नुस्
जेलमा भित्रैैैका महिला कैदीहरुले पुलिसलाइ यौ’नसम्पर्कको प्रस्ताव राखेपछि…
आरुबोटे नरसंहार-४ : सवा घन्टामै यसरी गरियो ९ जनाको हत्या ! ढोका तोडफोडबिनै कसरी भयो हत्याराको ‘इन्ट्री’?
मम्मीको पेटमा बच्चा थियो तर अर्कैसंग भा, ग्नु भो : छोराछोरीले खोले वास्तविकता (भिडियो सहित)
नेकपाको चाल हेर्दा ‘खोइ के, खोइ के’ – रिजाल
श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहनसँग बिहे गर्ने हल्ला सुनेपछि, बुवा शक्त्ति कपुरले यस्तो भने!